Bentley iyo tiknoolajiyada "soo baxaya" ee loogu talagalay sawirada radar-ga
Bentley iyo tiknoolajiyada "soo baxaya" ee sawirrada radar
Luulyo, 2008 Microstation-Bentley
Waxay ahayd mid ka mid ah filashadayda markaad timaado casharro laga bilaabo Baltimore bishii Maajo si loo arko waxa Bentley u bandhigto sawirrada 3D.
Isticmaalka sawirada 3D ee Microstation
Waxay ahayd bandhig ay sameeyeen RIEGL USA, shirkad gaar ah oo loogu talagalay bixinta adeega laser-ka iyo adeegga wax-qabadka, RIEGL wuxuu ku dhashay Austria laakiin wuxuu leeyahay caymis dalal badan oo ay ku jiraan Mareykanka. Inkasta oo boggeeda aysan haysan wax ku saabsan codsiyada loogu talagalay ujeedadaas, bandhigga waxay muujiyeen shaqeyn xiiso leh oo daruuro toos ah uga soo dejisa Ri Scan Pro Microstation ... leh qaar ka mid ah badhannada si ay u habeeyaan soo dajinta.
Ted Knaak, madaxwaynaha ayaa ahaa midkii sameeyey mudaaharaadkii, nasiib daro ma jiro wax macluumaad ah oo internetka ah ... sidaas darteed ugu fiican waa la xiriir iyaga si toos ah.
Tusaha kale ee jadwalka ah ayaa muujinaya in sida muuqata ay muujinayso "iibsashada soo baxday" aan la samayn ... sidaas darteed wax badan maaha inay muujiyaan. Hadda for Terrascan, Cloudworx, Cyclone iyo kuwa kale oo la mid ah ayaa weli jira wax kale, wax ka Microstation.
Mustaqbalka "soo kabashada"
Marka Bentley ma laha qalab gaar ah oo ku saabsan mawduuc, waxa uu leeyahay qaar ka mid ah shirkadaha gaarka loo leeyahay xal shaqada iyo kuwani inta badan wac "baxaya". Aan xun, Bentley ma si aad u wanaagsan in ay wada-hawlgalayaasha in ay horumariyaan codsiyada kaabaha sida ay tahay ku siiyo fursado cadayn.
Laakiin waxaan sidoo kale xusuustaa sannado 4 ka hor in Bentley loo tixgeliyo shirkadda "Montes" oo soo baxday, taas oo ay samaysay noocyada ka hor XM; khariidado fiican. Sidaa daraadeed shirkadda Corporate Montage waxay si aad u wanaagsan u fidinaysaa si ay u abuurto qaabab aad u wanaagsan oo ay ka midka yihiin muuqaalada, shadows, qalabka sawirada iyo daabacaadda daabacaadda.
Sida XM, Bentley iibsaday wax soo saarka ee ay "baxaya" oo hadda loo yaqaan Scripts CAD iyo Scripts Map. Sidaas waxa uu leeyahay si ay u arkaan waxa dhacaya qaar ka mid ah horumarka RIEGL 4 sano gudahood.
Hadda ma jiraan wax Bentley ah oo loogu talagalay sawirada LIDAR, oo kaliya la xariir feejignaantaada, sugnaashada Microstation Athens, oo la filayo in la sii daayo sanadkan dambe.
Post Previous«Previous Goob wanaagsan oo IMS ah ayaa la sameeyay Manifold
Post Next Ku xir dhulka Dunida leh ArcGIS 9.3Next »
Hal Jawaab u ah "Bentley iyo tiknoolajiyada soo baxaya" ee sawirada radar "
Noocyada V8i horeba waxaa ku jira taageerada daruuraha darajada